कागज रेखाचित्रहरुलाई सुन्दर डिजिटल कम्पोजिटहरुमा रूपान्तरण गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
कागज रेखाचित्रहरुलाई सुन्दर डिजिटल कम्पोजिटहरुमा बदल्नुहोस्
हामी पूर्ण रूपमा डिजिटल युगमा बाँचिरहेका छौं, त्यहाँ केहि धेरै फाइदाहरू छन्, स्पष्ट रूपमा हामी कुनै पनि परियोजना ल्याउन कम्प्युटर, ट्याबलेट र मोबाइल फोनमा धेरै निर्भर छौं.
तिमीले कलम र कागजको साथ साथीलाई चिठी लेखेको कति समय भयो? वा साधारणतया, तपाईं कागज र पेन्सिल को लागी कहिले सम्म चित्रित गर्नुभएको छैन? ट्याब्लेट ठीक छ, तर कागज र पेन्सिल एक श्रोत हो जुन हामीलाई धेरै हास्यास्पद नतिजा प्रदान गर्दछ।
म लामो समयदेखि हातले लेखेको वा तर्केको थिइनँ, र कागजातमा बनेका मेरो चित्रहरू वा फन्टहरू मेरो सिर्जनाहरूमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनु भन्ने विचारलाई म सँधै मन पराउँथें, मलाई लाग्छ कि यसले परियोजनाहरूलाई धेरै व्यक्तिगत स्पर्श दिन्छ।
आज म तपाईंलाई देखाउन चाहन्छु कि कति सरल शक्ति छ कागजमा बनाउनु भएको रेखाचित्रलाई सुन्दर डिजिटल कम्पोजिशनमा बदल्नुहोस्, किनभने हातले चित्रण गर्ने कला डिजिटलसँग विचित्र हुँदैन।
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो कागजमा हाम्रो परियोजना बनाउनुहोस्। धेरै ड्रइ ,हरू, स ,्केतहरू, विभिन्न तत्वहरू, अधिक मयरियर बनाउन सल्लाह दिइन्छ।
त्यसो भए हामी हाम्रो स्केच स्क्यान गर्दछौं।
हामी फोटोशपमा हाम्रा स्केचहरू खोल्नेछौं र सेतो पृष्ठभूमि हटाउनेछौं। हामी सँधै उच्च गुणमा हाम्रा कामहरू गर्दछौं। त्यसोभए हामीसँग pp२ पीपीमा बचत गर्न हामीसँग समय हुनेछ।
हाम्रो चित्र को हरेक हामी यसलाई छुट्टै तहमा राख्नेछौं र यसलाई नाम दिनेछौं।
त्यसो भए हामी लेयर छनौट गर्दछौं जुन हामी परिमार्जन गर्न चाहन्छौं र यसलाई चयन गर्न सक्छौं।
हामीसँग केवल तीन सरल चरणहरू बाँकी छन्:
- प्रभाव जोड्नुहोस्
- र over ओभरले
- तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने र color छनौट गर्नुहोस्।
र यो नै हो, हामीसँग पहिले नै हाम्रा रेखाचित्रहरू डिजिटल स्वरूपमा हातले बनाएका छन् र हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने कम्पोजि .्हरू बनाउनको लागि तयार छन्।
मलाई पोस्टरहरू बनाउनको लागि मजाको टेक्निक फेला पर्‍यो, ब्रान्डहरूका लागि मस्कटहरू, चाडपर्वहरू, प्रिन्टहरू, इत्यादि। र यस तरिकामा हामी परियोजना को लागी धेरै व्यक्तिगत स्पर्श दिन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कागज रेखाचित्रहरुलाई सुन्दर डिजिटल कम्पोजिटहरुमा बदल्नुहोस्
Triptychs डिजाइन गर्न टेम्पलेट
Looxie को साथ दुनिया मा कहीं पनि अन्य प्रयोगकर्ताहरुबाट फोटो अनुरोध गर्नुहोस्